Bit By Bit - Sava lalana - 1.4.2 Tsotra ny pitsiny
Complex fikarohana na oviana na oviana dia afaka mandresy lahatra na iza na iza ny zava-mahagaga. Raha miahy miova saina, dia ny fikarohana dia tokony ho tsotra.
Fikarohana ara-tsosialy ao amin'ny vanim-potoana nomerika matetika mifandray amin'ny pitsiny, toy ny raitra sy be pitsiny algorithms computing. Izany no Mampalahelo satria ny fikarohana ara-tsosialy mandresy lahatra indrindra matetika no tsotra. Mba ho mazava, tsotra fikarohana dia tsy mitovy amin'ny mora fikarohana. Raha ny marina, dia matetika sarotra be mba hamoronana tsotra fikarohana.
Ny antony manan-danja indrindra ny fikarohana tsotra kokoa dia izany no hany fomba hamoronana believable, vokatra tsy ampoizina. Ohatra, sary an-tsaina fa vao nitarika fikarohana mampiasa ny fomba fiasa sarotra mampino. Raha ny vokatra mitovy ny fiandrasana, dia ho mety hanaiky azy ireo. Fa, raha ny vokatra mitovy amin'ny zavatra andrasana, manana safidy roa: hanaiky ny vokatra tsy ampoizina na hiahiahy ny fomba fiasan'ny sarotra. Ny Vina dia hoe ianao no tena mety hisalasala ny fomba fiasan'ny sarotra. Izany mahatonga heviny tanteraka, nefa midika izany fa ny sarotra kokoa ny fomba fiasa, ny tsy azo inoana tokoa ny hamokatra vokatra tsy ampoizina fa ho tena hino. Tamin'ny fotoana sasany, dia mety ho lasa fomba pitsiny toy izany fa ny hany vokatra fa afaka mino ireo izay mifanaraka anareo fanantenanao. Tamin'izay fotoana izay, ny fikarohana efa very zavatra tena manan-danja: fikarohana dia tokony ho afaka hanova ny sainao.
Ny olana fotsiny izay efa voalaza mandrakariva indray mandeha mafy kokoa manomboka miezaka ny hanova olon-kafa ny saina. Sary an-tsaina manolotra ny mampino sarotra tapa-fikarohana izay manana vokatra tsy nampoizina ny olon-kafa. Izany olona hafa tsy nandany volana manoratra ny fehezan-dalàna sy izay miasa amin'ny ny angona ka rehefa miatrika ny safidy ny manaiky ny tsy nampoizina ny vokany, na misalasala sarotra fomba fiasa, fa mila azo antoka fa handeha hisalasala ny fomba fiasan'ny sarotra. Raha miahy mandresy lahatra olon-kafa ny hanova ny sainy, dia ny fikarohana tokony ho tsotra.
Simple fikarohana dia avy amin'ny voajanahary mety eo amin'ny fanontaniana sy ny angona; amin'ny teny hafa, tsara nanaovana fikarohana. Mahantra fikarohana famolavolana, na izany aza, dia mitarika ho amin'ny ratsy tarehy pitsiny izay azo avy mamelatra ny lanitra ny angona amin'ny fanontaniana izay tsy izy ireo mifanaraka tsara. Ity boky ity dia mifantoka amin'ny fomba roa mba hamoronana voajanahary mety eo amin'ny fanontaniana sy ny tahirin-kevitra. Voalohany, ity boky ity hanampy anao zava-misy manontany fanontaniana ny angona. Faharoa, ity boky ity dia hanampy anao hanangona ny tahirin-kevitra tsara mba hamaly ny fanontaniana.